Nitondra fanazavana momba ny fahamaizana tao amin’ny Trano printim-pirenena ny tale jeneralin’ny trano printim-pirenena Jean Angelson Andriamboavonjy fa manahy ny mety hisian’ny famonoana ny orinasa iny zava-nitranga iny. Nilaza izy fa efa esorina tsikelikely ireo asa sasan-tsasany izay tokony hosahanin’ny trano printim-pirenena. Mbola ao anatin’ny fanadihadiana rahateo ny polisy misahana ny heloka bevava momba ity raharaha ity ka aorian’izay no hamantarana ny marina rehetra momba izany. Ao anatin’ny fanaovana ny tombana ihany koa ny orinasa momba ny entana may rehetra ka tsy mbola afaka nilaza ny tentimbin’ny entana kilan’ny afo. Na eo aza izany, masinina maromaro kosa no levon’ny afo ankoatra ireo fitaovana hafa. Ny Trano printim-pirenena avokoa no misahana ny fanontana ny antontan-taratasy rehetra momba ny raharaham-panjakana eto amin’ny firenena. Voalaza fa indroa nitrangana firehetana ny Trano printim-pirenena tao anatin’ny 125 taona nijoroan’ny orinasa.
“Tsy ekena intsony ny fisian’ny fanonganam-panjakana. Ilaina ny mpanohitra fa tokony hanohitra amin’ny ara-dalàna. Zo sendikaly ny fitakiana saingy tokony hatao am-pahamendrehana”, hoy ny filoha nasionalin’ny Hafari Malagasy nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety omaly, momba ny fahitany ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana izao. Tanjona efa napetraky ny fikambanana hatramin’izay ny hananan’ny malagasy tsirairay avy trano fonenana.
Nohamafisiny koa fa miroso hatrany ny fikambanana amin’ny alalan’ny tetikasa fanapariahana ny Jivima (Jiro vita malagasy). Haparitaka any amin’ny tetikasa momba ny fifindra-monina miala ny tanàn-dehibe any Soaniadanana ity jiro mandeha amin’ny herin’ny masoandro ity. Marobe ireo mponina mitaraina amin’ny afitsoky ny delestazy isan’andro ka izany rahateo no isan’ny nanosika ny Hafari Malagasy hamokatra angovo mandeha amin’ny herin’ny masoandro.
Nilaza ihany koa izy fa tsy mbola nivarotra tany ary tsy misy resaka fivarotana tany mihitsy ao amin’ny Hafari. Mijery sy mamaha ny olana mahazo ireo vahoaka tratran’ny tsindry hazolena manoloana fanjakazakana mahazo azy ireo no ataon’ny fikambanana.
Hisy ny valandresaka manokana hataon’ny Hafari Malagasy, ny alarobia ho avy izao hanazavan’izy ireo momba ny pylône izay voalaza fa miteraka tsy fahasalamana ary koa niteraka resabe eny anivon’ny fiarahamonina. “Misy hatrany ny sakana rehefa misy fampandrosoana. Tsy ampy ny fampahafantarana ny olona saingy mijanona amin’ny resaka honohono hatrany ny olona ka isan’ny mahatonga ny olona tsy mahalala ny tena marina izany”, hoy izy.